राजधानीका बैंक बन्द : निषेधाज्ञासँगै अब एटिएम पनि नचल्ने ! «
राजधानीका बैंक बन्द : निषेधाज्ञासँगै अब एटिएम पनि नचल्ने !
Published : 20 August, 2020 6:18 pm
बैंक तथा वित्तीय संस्था अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखिए पनि बिहीबार उपत्यकाका सम्पूर्ण बैंक बन्द भएका छन् । प्रहरीले कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिएको भन्दै उपत्याकाका सबै बैंक बन्द भएका हुन् । बैंकर्स अनिल केशरी शाहले प्रहरीले अवरोध पु¥याएपछि बैंक बन्द गर्नुपरेको बताए । सरकारले बुधबार रातिदेखि निषेधआज्ञा जारी गरे पनि बैंकलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकले आवश्यकता हेरी काठमाडौंमा ५, ललितपुरमा २ र भक्तपुरमा १ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘आज खोल्न जाँदा सरकारको विपरित भएजस्तो देखियो,’उनले भने, कर्मचारीलाई घण्टौ उभ्याएर कोरोनोको जोखिम बढाएको अनुभूति भयो ।’ बैंक तथा वित्तीय सरकार विरोधी कहिल्यै नजाने भन्दै शाहले नेपाल बैंकर्स, राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयको बैठकपछि मात्रै शुक्रबारदेखि बैंक खोल्ने नखोल्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए । ‘एटिएममा पैसा हाल्न पनि बैंक पुग्नुपर्छ,’ शाहले भने, ‘यसरी बैंक पुग्नै नपाएपछि त एटिएम पनि बन्द हुनसक्ने सम्भावना देखियो ।